china n95 nkpuchi eme igwe ihu nkpuchi ntị loop ịgbado ọkụ igwe Akpaaka ntị gbalaga ịgbado ọkụ igwe
1.The ngwá adopts abụọ-ọnọdụ ultrasonic ịgbado ọkụ technology, nke nwere nnukwu arụmọrụ, elu na-eri arụmọrụ na elu kwụsie ike.
Naanị otu onye ka achọrọ iji rụọ ọrụ n'otu ngwaọrụ, na-ebelata ụgwọ ọrụ.
3.Feeding, akpaka ọnwụ, akpaka ịgbado ọkụ na akpaka blanking bụ nchebe na-adaba adaba.
4.Automatic ịgbado ọkụ nke urukurubụba nkpuchi lugs nwere ike ngwa ngwa dochie n'ọnọdu eletrik na imeghari ka mmepụta nke iche iche nke urukurubụba masks.
ntuziaka nkpuchi Ndinam igwe emepụta ntị akaghị ihu nkpuchi igwe Nsukka
1. Eji ya mee ihe maka ịgbado ọkụ n'olu nke ọtụtụ masks.
2. Oghere mgbanwe iji nye gị nhọrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị.
3. Ntuziaka ntuziaka, mbelata akpaka, ịgbado ọkụ na-akpaghị aka, ọrụ nri na-akpaghị aka dị mma ma dịkwa mma.
4. The ntị gbalaga nke urukurubụba nkpuchi nwere ike welded na-akpaghị aka, na n'ọnọdu eletrik nwere ike gbanwere ngwa ngwa imeghari ka mmepụta nke dị iche iche masks.
ewepụghị nkpuchi mmepụta igwe earloop nkpuchi igwe soplaya earloop ihu nkpuchi igwe
1. eldkwado akwa ntị maka KN95 masks.
2. Oghere mgbanwe, na-enye gị nhọrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị.
3. Ntuziaka ntuziaka, mbelata akpaka, ịgbado ọkụ na-akpaghị aka, ịrụ ọrụ akpaka na-akpaghị aka ma dịkwa mma.
4. Ntughari na-akpaghị aka nke eriri ntị ntị, ngbanwe ngwa ngwa nke nhazi ọnọdụ iji gbanwee maka ụdị mmepụta nkpuchi dị iche iche.
5.Rotary arụ ọrụ table, nke nwere ike ngwa ngwa bugharia nkpuchi na dịkwuo ịgbado ọkụ ọsọ.
Ihu Nkpuchi igwe china n95 nkpuchi na-eme igwe Akpaaka ihu banding igwe
1.The akụrụngwa ejiri 6-ọnọdụ akpaka n'usoro n'usoro n'elu ikpo okwu, na ultrasonic akpaka ịgbado ọkụ technology na akpaka ihu akara nke nkpuchi.
2.The isi usoro na-agụnye ntuziaka loading, ultrasonic ịgbado ọkụ na onu akara, na akpaka ebutu.
3.Automatic ẹkụre ịgbado ọkụ usoro, adaba ime ihe & elu mkpụrụ ọnụego.
4.Ọ nwere ike ịgbanwe ngwa ngwa nkwụsị iji megharịa maka mmepụta nke ụdị ihe nru ububa nru ububa.
Kn95 Mask Machine ihu banding igwe factory Single ojii ihu banding igwe
1.The akụrụngwa bụ simplex ihu akara ngwaọrụ na ala ọdịda ọnụego.
2. Isi usoro site na ntuziaka nri, ultrasonic ịgbado ọkụ akara onu.
3. Mfe ịgbado ọkụ usoro, mfe ọrụ na elu mkpụrụ.
4. Ọ nwere ike imeghari na mmepụta nke ụdị dị iche iche nke ihe nru ububa.
n'ọnụ isi eriri nkpuchi ịgbado ọkụ igwe emepụta Single ojii ji kpachie oghere ihu banding igwe
2.the isi usoro site ntuziaka nri, ultrasonic ịgbado ọkụ akara onu.
3.Simple ịgbado ọkụ usoro, mfe ọrụ na elu mkpụrụ.
4.Ọ nwere ike imeghari na mmepụta nke ụdị dị iche iche nke urukurubụba masks.
5.Safty grating, mgbe enwere ihe na mpaghara nyocha, akụrụngwa ga-akwụsị na-akpaghị aka iji hụ nchekwa nke onye ọrụ.
china n95 nkpuchi na-eme igwe Igwe nkpuchi ihu igwe nkpuchi
Iji mezuo ahịa a na-achọ, a pụrụ ịkpụzi ebu ahụ ngwa ngwa iji mepụta ụdị ụdị nsị nke urukurubụba.
non kpara disposable ịwa ahụ ihu nkpuchi Ndinam igwe N95 ihu masking igwe
Nke a bụ a n'ụzọ zuru ezu akpaka igwe maka amị mpịachi nkpuchi mmepụta akara. weld 3 ka 6 n'ígwé eyi na-abụghị kpara akwa, meltblown ákwà, arụ ọrụ carbon na nyo ihe iji ultrasonic technology. Bụ a na-na-na-otu akpaka mpịachi nkpuchi nwere ike esichara 3 M9001 / 9002 mpịachi nkpuchi. Dabere na ihe eji eme ihe, ihe nkpuchi ahụ nwere ike izute ụkpụrụ dị iche iche, dị ka FFP1 / FFP2 / KN95 .. Enweghị ọrụ ọ bụla achọrọ na usoro ahụ dum, nke nwere ike ibelata mkpofu nke ịgbado ọkụ, mpịachi, akara, ịkpụgharị na ịkpụ na-abụghị -eji eriri mmepụta. Ihe omuma ya nke oma na eme ka ihe nkpuchi meputara. A na - emepụta ngwaahịa niile site na igwe ọrụ.
ihu nkpuchi Ndinam igwe